नेपाल टेलिकमको लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफर, रिचार्ज र डे डाटा प्याक किन्दा बोनस डाटा पाईने - Technology Khabar
» नेपाल टेलिकमको लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफर, रिचार्ज र डे डाटा प्याक किन्दा बोनस डाटा पाईने
नेपाल टेलिकमको लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफर, रिचार्ज र डे डाटा प्याक किन्दा बोनस डाटा पाईने
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीको थप सुविधाका लागि नेपाल टेलिकमले बैशाख ३१ (मे १४) देखि १ महिनाका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण मुलुकका धेरै स्थानमा निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवस्था छ । यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी नेपाल टेलिकमले बैशाख ३१ देखि एक महिनाका लागि लकडाउन स्टे कनेक्टेड अफरको रुपमा अनलिमिटेड डे डाटा प्याकेज र रिचार्जमा डाटा बोनस उपलब्ध गराउने भएको हो ।
कम्पनीकाअनुसार अनलिमिटेड डे डाटा प्याक अफर रु. ३९ मा उपलब्ध हुनेछ । सो डाटा प्याकको स्पिड १ एमबीपीएससम्म हुनेछ । यस अफर अन्तर्गत खरिद गरिएको प्याक चलाउन सकिने समयावधि २४ घण्टाको हुनेछ । दैनिक रुपमा एक पटक मात्र सो प्याक खरिद गर्न सकिने छ । यो प्याक बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्र चलाउन सकिने भएकोले सो समय अघि पछि डाटा चलाउँदा ग्राहकले खरिद गरेको अन्य डाटा प्याक वा पे एज यु गो उपयोग हुनेछ ।
यस अवधिमा एमपोस (MPoS) अर्थात विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकका माध्यमबाट मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा बोनस डाटा उपलब्ध गराइने टेलिकमले उल्लेख गरेको छ । रु. २०० देखि रु. ४९९ सम्म रिचार्ज गर्दा ५०० एमबी डाटा उपलब्ध गराइने छ र सो डाटा २ दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिने छ । यसैगरी रु. ५०० वा सो भन्दा बढी रकम रिचार्ज गर्दा १०२४ एमबी डाटा उपलब्ध गराइने छ र सो डाटा ४ दिन भित्र प्रयोग गर्न सकिने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यी अफरहरु फोरजी नेटवर्कमा प्रयोग गरी तीब्र गतिको डाटा प्रयोग गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । साथै, आफ्नो मोबाइलको सिमले फोरजी नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्ने/नसक्ने जाँच गर्न तथा फोरजी नेटवर्क एक्टिभेट गर्नका लागि *444# डायल गर्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सन् २०२० मा एप्पल एप स्टोरमा आएका १० लाख नयाँ एप अस्वीकृत